China Fire shutter rụpụta na Factory | Jiashun
Fire shutter bụ ụdị nke mgbochi ọkụ na mkpuchi mkpuchi ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị maka nnukwu oghere nke ụlọ. Ngwaahịa a na-arụ ọrụ ụfọdụ na nhazi na ntinye. Teknụzụ, ya na etiti ahụ, nwere ike izute ihe chọrọ nkwụsi ike ọkụ na iguzosi ike na-eguzogide ọkụ. Fire shutter bụ ụdị nke ibughari ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ.
Fire shutter bụ ụdị nke mgbochi ọkụ na mkpuchi mkpuchi ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị maka nnukwu oghere nke ụlọ. Ngwaahịa a na-arụ ọrụ ụfọdụ na nhazi na ntinye. Teknụzụ, ya na etiti ahụ, nwere ike izute ihe chọrọ nkwụsi ike ọkụ na iguzosi ike na-eguzogide ọkụ. Fire shutter bụ ụdị nke ibughari ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ. A na-akpọkọta ya ma tinye ya na igbe ntụ na elu nke ọnụ ụzọ na windo ahụ. Mgbe ọkụ malitere, a ga-emeghe ya iji gbochie ọkụ ahụ ịgbasa site n'ọnụ ụzọ na windo oghere. A na-eji ihe mkpuchi ọkụ eme ihe n'ọtụtụ ebe nkewa ọkụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ obodo. O nwere ike igbochi mgbasa nke ọkụ ma hụ nchekwa nke ndụ na ihe onwunwe. Ọ bụ ụlọ ọrụ mgbochi ọkụ dị mkpa na ụlọ ndị ugbu a.
N'ezie otu n'ime ihe ndị a kwesịrị ịmasị gị, biko mee ka anyị mara. Anyị ga-enwe obi ụtọ ịnye gị nkwupụta mgbe ị natara nkọwa zuru ezu nke mmadụ. Anyị nwere ọkachamara R & D nke aka anyị iji zute nke ọ bụla n'ime requriements, Anyị na-atụ anya ịnata ajụjụ gị n'oge na-adịghị anya ma nwee olileanya ịnwe ohere isoro gị rụọ ọrụ n'ọdịnihu. Nabata na ile nzukọ anyị anya.
Mgbe emepụtara ya, ọ na-eji usoro bụ isi nke ụwa maka ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ọnụahịa ọdịda dị ala, ọ dabara maka nhọrọ ndị ahịa Jeddah. Ọrụ anyị. dị n'ime obodo ndị mepere emepe nke mba, ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị nsogbu, ọnọdụ pụrụ iche na ọnọdụ ego. Anyị na-agbaso "ndị mmadụ na-agba mbọ, na-akpachapụ anya n'ichepụta, brainstorm, na-eme amamiihe" ụlọ ọrụ na nkà ihe ọmụma. Nlekọta ezigbo njikwa dị mma, ọrụ dị egwu, ọnụ ọnụ na Jeddah bụ nguzo anyị gburugburu ndị asọmpi. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, kpọtụrụ ịkpọtụrụ anyị site na ibe weebụ ma ọ bụ ndụmọdụ ekwentị, anyị ga-enwe obi ụtọ ijere gị ozi.
Nke gara aga: Steel waya nrapado teepu